Wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta oo booqday degmada Afgooye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta gaaray degmada Afgooye ee ka tirsan gobolka Shabeellah Hoose.
Wafdigaan ayaa booqasho ku tagay xarumaha ay ku shaqeeyaan ciidamada Booliiska iyo sidoo kale goobaha waxbarasho ee degmadaasi.
Wafdiga ka socda Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inuu kormeer ku sameynayey mashaariic dalkaasi ka hirgeliyey degmada Afgooye, waxaana wafdigaas hogaaminay Ciid Cabdalla oo ah madaxada mashaariicda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobalka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa sheegay in xubnahaan ay ka socdeen shirkad mashaariic horay uga fulisay degmada Afgooye.
Waxa uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay aad ugu faraxsanyihiin socdaalka wafdigaan iyo sidoo kale mashaariicda degmadaasi ay ka sameeyeen sida dib u habeenta xarunta degmada iyo Saldhiga Booliiska.
Masuuliyiin ka kala socda Puntland iyo Somaliland oo ku gaaray magaalo muran ka jiro